ကမ္ဘောဒီးယီးယားအလုပ်သမားများရိုတ်သတ်သဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦး သေဆုံး
သေဆုံးသွားသူ မြန်မာအလုပ်သမား ကိုမိုးမိုး
ဇွန်လ ၅ -၂၀၁၂
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆုံခါမြို့ တွင်ရှိသော SIAM INTERNATIONAL
FOOD CO, Ltd ငါသေတ္တာ အလုပ်ရုံ တွင် ယမန်နေ့က နေ့လည်ပိုင်းက ကမ္ဘောဒီးယား
အလုပ်သမားများ ၀ိုင်းရိုက်သတ် သဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော် ခန့် ရှိသည့် အဆိုပါ အလုပ်ရုံတွင်ယမန်နေ့ က
ကမ္ဘောဒီးယားအလုပ်သမားများနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ ရိုက်ကြရာ မြန်မာအလုပ်သမား
၁၀ဦးခန့် ဒါဏ်ရာရရှိသွားပြီး အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကိုမိုးမိုးဆိုသူမှာ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက
ဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားကြောင်းအလုပ်သမား ကိုလွင်ကပြောသည်။ ၀ိုင်းရိုက်သည့်
ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးများမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်း အလုပ်သမားများကပြောသည်။
“ အလုပ်သမား တွေက နေ့ဆိုင်းညဆိုင်းရှိပါတယ်။ ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့
အလုပ်သမားတစ်ယောက်က ကမ္ဘောဒီယားတွေနေတဲ့ အဆောင်နားက သစ်ပင်မှာ ပုခက် နဲ့ အိပ်နေတယ်။ အဲဒါကို ကမ္ဘောဒီးယားတွေက ၀ိုင်းရိုက်ကြတယ်။ အဲဒါကို
ကျနော်တို့ က အလုပ်ရုံကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် မရှင်ခဲ့ပဲ အခု
လိုဖြစ်သွားတယ်။ ကျနော့်မှာလည်း မဲစေ့မှာ ပေါက်ပြဲသွားတယ်”ဟု ကိုတင်ဝင်းကပြောသည်။
ယမန်နေ့ နေ့လည် ၁နာရီခန့် က အလုပ်သမားများ အိပ်နေရာသို့ ဓါးဖြင့်ဝင်ခုတ်၊ဓါးဖြင့် ၀င်ထိုးသဖြင့် အလုပ်သမား ကိုမိုးမှာ ၀မ်းဗိုက်ပေါက်ပြဲသွားပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။
အလုပ်ရုံတွင် MOU နားလည်မှုစာချွန်လွှာဖြင့် လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်
မြန်မာအလုပ်သမား ၅၀၀ ခန့် ရှိသည်။ အဆိုပါ အလုပ်သမားများအနက် အမျိုးသား ၂၀၀ ခန့် နှင့် အမျိုးသမီး ၃၀၀ခန့် ရှိကြသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရိုက်သတ်သေဆုံးမှုများရှိလာသဖြင့်
ယခုအလုပ်ရုံတွင် ယခင် ၂နှစ်ခန့် ကလည်း ကမ္ဘောဒီယား အလုပ်သမားနှင့်မြန်မာအလုပ်သမားများ
ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ အလုပ်ရုံတွင် MOU နှင့်လာသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအား ကမ္ဘောဒီယားအလုပ်သမားများနေထိုင်ရာဘက်တွင်ထားရှိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့
ပြဿနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ် သမား များကပြောသည်။
ဆုံခါမြိှုှု့ တွင်ရှိသော SIAM INTERNATIONAL
FOOD CO, Ltd ငါသေတ္တာ အလုပ်ရုံမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ
FOOD CO, Ltd ငါသေတ္တာ အလုပ်ရုံ မြန်မာအလုပ်သမားများ
6/05/2012 05:36:00 PM
အလွဲသုံးစားမှုအား မကျေနပ်၍ ပဲခူး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များ နုတ်ထွက်
ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ) | အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၀၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၃၇ မိနစ်စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပဲခူးမြို့ ရပ်ကွက် ခုနှစ်ရပ်ကွက်မှ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရပ်/ကျေး အဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများ အပါအ၀င် ပါတီဝင် အများအပြားသည် အထက်အဆင့်၏ အလွဲသုံးစားပြုမှုအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပါတီရုံးသို့ တိုင်းကြားခဲ့သော်လည်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသဖြင့် ပါတီမှ ဇွန်လဆန်းက နုတ်ထွက်ခဲ့ကြကြောင်း တိုင်း/ရုံး အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တဦးဖြစ်သူ ပဲခူးမြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။“အောက်ခြေက အဖွဲ့ဝင်တွေက တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကော်မတီဝင်တွေက ခြစားနေတယ်။ ဒီလူတွေနဲ့ တွဲမလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုပြီး နုတ်ထွက်ကုန်ကြတာ။ တိတိကျကျ သိရသလောက်တော့ ခုနှစ်ရပ်ကွက်ကတော့ လုံးဝ ဖွဲ့လို့ မရတော့ဘူး ၊ ရပ်/ကျေးအဆင့် ကော်မတီဝင် ၁၅ ဦး နုတ်ထွက် ကုန်ကြတယ်။ သာမန် ပါတီဝင်တွေ ဦးရေက ၁,၀၀၀ ကျော်လောက် ပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။လွန်ခဲ့သည့် လများ အတွင်း၌ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့်မှ ကော်မီတီဝင်များမှ လယ်သမားများအား ဖြန့်ဖြူးရန် အကြောင်းပြ၍ ဓါတ်မြေသြဇာ လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ရရှိလာသည့်အခါ သုခမိန် ပွဲရုံ၌ ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ ထိုမှ ရရှိ လာသည့် အမြတ်ငွေ ကျပ်သိန်း ၆၀၀ ခန့်အား ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အလားတူ စားအုန်းဆီ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် အခြား စီးပွားရေး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါမစ်များအား အစိုးရထံမှ လျှောက်ထားပြီး ပါမစ်များအား ရောင်းချကာ ငွေများကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။“တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်က ဆိုတာက ဒီကိစ္စတွေက လွန်သွားပြီ။ သူတို့တွေ အနေနဲ့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့လို့။ ဒီကိစ္စ ပြည်သူတွေ သိသွားရင် သူတို့ စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ထိခိုက်ပြီး ပြည်သူတွေ အယုံအကြည် မရှိမှာစိုးလို့ သိုသိုသိပ်သိပ်ပဲ ဒီကိစ္စကို လုပ်ဆောင်နေကြတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီခြစားမှုကို တကယ်သိတဲ့ အောက်ခြေ အဖွဲ့ဝင်တွေက လုံးဝ မကျေနပ်ကြလို့ အခုလို ဖြစ်သွားတာ” ဟု အဆိုပါ တိုင်းရုံး ပါတီဝင်ဟောင်း တဦးက ပြောသည်။ပဲခူးတိုင်း လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး သက်ထွန်း က “တိုင်စာများသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ထုတ်ပယ်ပေးမည်”ဟု ပြောထားသဖြင့် ပဲခူးတိုင်း စည်ပင် ဝန်ကြီး ဦးရဲမြင့်၏ တပည့်များက ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက် ချယ်လှယ်ကြကာ ၎င်းတို့နှင့် အဆင်မပြေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဝန်ထမ်းများအား “လီဆယ် တိုင်တန်းလျက်” ရှိနေကြောင်း အင်းတကော် ကျေးရွာမှ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင် တဦးမှ မီဒီယာများသို့ ပေးပို့သည့် စာတစောင်၌ ဖော်ပြပါရှိသည်။
6/05/2012 04:58:00 PM
ဂျာတော့(ပ်) (မြစ်မခ)ဇွန်(၅)ရက်၊၂၀၁၂ခုနှစ်။တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီပူးပေါင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်မှ ရရှိလာသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏တောင်းဆိုချက်များအား ဇွန်(၄)ရက်နေ့တွင် ဥပဒေအရာရှိများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ ဥပဒေပြုရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးမှပြည်သူများ တင်ပြထားသည့် ပြည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးဟု ခေါင်းစဉ် သုံးခုအောက်တွင်ပြည်သူများတောင်း ဆိုချက်အား ထည့်သွင်း ရေးသားထားကြောင်းကိုလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်များထံက သိရှိရသည်။“ပြည်သူတွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင် တင်ပြ။ တစ်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲကို အချက်(၁၀၀)ကျော် တင်ပြတယ်။ ဒါကို မနေ့က အစည်းဝေးလုပ်တယ်။ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး တူတဲ့အချက်တွေကို အကုန်ပေါင်းပြီး စာတမ်းပြုစုထားပြီးပြီ”ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အတွင်းရေးမှူး ဦးခက်ထိန်နန်က ပြောသည်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းမှ ဇယား (၁)တွင်ပါရှိသည့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်အချို့အားဇယား(၂) ဖြစ်သည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ဥပဒေပြုရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။“စာသင်ကျောင်းမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ခန့်ချင်ရင် ခန့်လို့ရအောင်။ပြည်နယ်အစိုးရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘာမှ မရှိလို့ အခွင့်ပေးဖို့၊ရခိုင်ပြည်နယ်က ဂတ်(စ်)ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပဲ ယူလိုက်တယ်။ကချင်ပြည်နယ်က ပြည်နယ် ကျောက်စိမ်း၊ သစ်တော၊ ရွှေတွေကို ပြည်သူတွေလည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိရမယ်” ဟု ဦးခက်ထိန်နန် က ဆက်ပြောသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များကတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များသို့ မေလ(၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၂)ရက်ကြာကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အနေဖြင့်ကျန်ရှိနေသေးသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးများ သို့ ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့တွင်ဆက်လက်သွားရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။by Shwe Myitmakha Media Group
6/05/2012 04:52:00 PM
သံတွဲမြို့တွင်ဂျီတီအိုင်ကျောင်းကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး တက်ရောက်နေကြသော တောင်ကုတ်မြို့မှ ကျောင်းသူကျောင်းသား များကို တောင်ကုတ်မြို့ခံများက မော်တော်ကားလေးစီးဖြင့်
လာရောက်ခေါ်ဆောင် သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ကျောင်းသားများနှင့် သံတွဲမြို့ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့
အကြား ပြဿနာများဖြစ်မလာစေရန် နေရပ်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ထား ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
7Day News Journal - Facebook
6/05/2012 04:44:00 PM
6/05/2012 03:47:00 PM
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဇွန်လ(၅) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ လျှပ်စစ်မီးကို အပြည့်အဝပေးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ခိုင်က ရန်ကုန်တိုင်း(မ်)ဂျာနယ် သို့ပြောကြားသည်။ယင်းအပြင် စက်မှုဇုန်များကိုလည်း တစ်နေ့လျှင် ၅ နာရီ အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ " ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ (ယနေ့) ကစပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂၄ နာရီ အပြည့်ပေးတော့ မှာပါ ရွှေလီ ရေအားလျှပ်စစ်ကရတဲ့ ဓာတ်အားလည်း အပြည့်အ၀ပြန်ရနေပါပြီ အဲ့ဒါကြောင့် ယခင်အတိုင်း ပုံမှန် အပြည့်အ၀ပေး သွားမှာ ပါ " ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ခိုင်က ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့သို့ ဓာတ်အားပို့လွှတ်သည့် ရွှေလီ-မန်စံ ဓာတ်အားလိုင်းကို KIA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့၏ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖျက်စီးမှုကြောင့် ၁၉-၅-၂၀၁၂ ခုနှစ် ၀၂း၄၇ နာရီ အချိန်တွင် ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့သော ၂၃၀ KV ရွှေလီ-မန်စံ မဟာဓာတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင် အမှတ် (၇၃၊၂၀၆၊၂၀၇၊၂၀၈)တို့ကို ပြန်လည်ပြုပြင် သည့်လုပ်ငန်း များမှာ ၁-၆-၂၀၁၂ (၁၆းဝဝ) နာရီ အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဓာတ်အားများကို ယခင်အတိုင်း ပိုမိုဖြန့်ဖြူး လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန်များကိုလည်း အုပ်စု(၂)အုပ်စုအနက် ၀၆းဝ၀ နာရီမှ ၁၁းဝ၀ နာရီအထိ တွင် အုပ်စုတစ်စုကို လည်းကောင်း ၊ ၁၁းဝ၀ နာရီမှ ၁၆းဝ၀ နာရီ အထိတွင် အုပ်စုတစ်စုကိုလည်းကောင်း အလှည့်ကျ ဓာတ်အား ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ၂၃းဝ၀ နာရီမှ နောက်တစ်နေ့ ၀၅းဝ၀ နာရီ အထိတွင် အုပ်စု(၂)စုလုံးကို ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Reporter: သန်းနိုင်ဦး - Yangon Media Group
6/05/2012 02:40:00 PM
စည်ပင်သာယာ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ပြည်နယ်အချို့ အခက်ကြုံ
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများက ၎င်းတို့ ဘတ်ဂျက်ကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေခွင့်ပြုထားရာ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော စည်ပင်သာယာ ဥပဒေများ ရေးဆွဲနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်များက စီစဉ်နေသော်လည်း ၁၉၉၃ တည်ဆဲ စည်ပင်ဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း မရှိသဖြင့် ဥပဒေ ရေးဆွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအုန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဇယား ၂ ပါ ပြည်နယ်အတွင်း စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဥပဒေပြုနိုင်ခွင့် ရှိသော်လည်း ၁၉၉၃ စည်ပင်သာယာ ဥပဒေသည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများအပေါ် လုပ်ကိုင်ခွင့် မပေးထားကြောင်း၊ တည်ဆဲ ဥပဒေတစ်ရပ် မဖျက်သိမ်းသေးသည့် အတွက် ဥပဒေသစ်များ ပြုရန် အခက်ကြုံနေကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။“ဒီဥပဒေကို မဖျက်ရသေးရင်လည်း နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့် စတာတွေ ထုတ်ပြီး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလို့ ရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ကရင်ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ် ဦးသိန်းလွင်ကလည်း မိမိတို့ပြည်နယ် အနေနှင့် စည်ပင်သာယာ ဥပဒေ ရေးဆွဲရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ အပိုဒ် (၈) အရ စီစဉ်နေသော်လည်း ဒေသအတွက် ရည်ရွယ်သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေများနှင့် ထိပ်တိုက် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုများ ရှိနိင်သည်ဟု သဘောပေါက်၍ ပြည်နယ်တွင် စည်ပင်သာယာ ကိစ္စရပ်များကို လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေ အရသာ ဆောင်ရွက်နေရပြီး ၁၉၉၃ စည်ပင်သာယာ ဥပဒေ မဖျက်သိမ်းသေးသည့် အတွက် ပြည်နယ် လွှတ်တော်က ဥပဒေပြုနိုင်ရန် ကြန့်ကြာနေရကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ဥပဒေပြုဇယားတွင် စည်ပင်သာယာ ကိစ္စရပ်များ မပါဝင်သဖြင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အနေနှင့် စည်ပင်သာယာ ဥပဒေကို လွတ်လပ်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ကြောင်း ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်ရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်လွင်က သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
6/05/2012 02:18:00 PM
တံဆိပ်ခေါင်းခွန်တိုး၍ နွမ်းပါးသူများ တရားစရိတ်အခက်အခဲရှိလာ
by Myit Makha Mediagroup on5Jun, 2012
နိုင်ငံတော်မှ တံဆိပ်ခေါင်းအခွန်နှင့် ရုံးခွန်နူန်းထားများအား တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲသည့် ပြည်သူများ အနေဖြင့် တရားရင်ဆိုင်သည့်အခါတွင် စားရိတ်အခက်အခဲပြသာာများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ဥပဒေပညာရှင်များ က သုံးသပ်သည်။
“အက်ဥပဒေပြင်ဆင်တိုင်း ပြင်ဆင်တိုင်း အခွန်းနူန်းတော့ နည်းနည်းပြောင်းကောက်ပါတယ်။ ခေတ်ကာလနဲ့ လည်းအညီ နောက် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်လဲ တရားရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အခွန်နူန်းထားဖြစ်တယ်။ အခုကအဲဒီလို မဟုတ်တော့ဘူး။ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူက မှန်တော့လည်း တရားမစွဲနိုင် မလုပ်နိုင်တာနဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ သူကနိုင်ပြီး မတရားတာတွေ ဖြစ်နေတယ်”ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်ကပြောသည်။
အဆိုပါ အခွန်နူန်းများ ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ခြင်းအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ၁၁/၂၀၁၂ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၁၂၂/၂၀၁၂ ဖြင့် ၂၀၁၂ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် တံဆိပ်ခေါင်း ခွန်များအား အဆ (၁၀၀)တိုးလိုက်ကြောင်း၊ ထိုနောက် (၁၁/၂၀၁၂) အစည်းအဝေးသဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၂၀၁၂ မတ်လ(၁၅ )ရက်နေ့မှာပင် ရုံးခွန်အမိန့်ကြေညာ စာအမှတ် ၁၂၃/၂၀၁၂ ဖြင့် ရုံးခွန်များအား အဆ(၁၀၀)တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေတွေတော် ရုံးခွန်နဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် တိုးတားတောင်မသိလိုက်ဘူး။ အဲလိုပြောင်းလဲမယ် ဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေကို ကြိုပြီးအကြောင်းကြားသင့်တယ်။ အခုပြည်သူတွေအနေနဲ့ အမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် မှန်နေလဲ ပိုက်ဆံမရှိရင် တရားစွဲဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ တရားစွဲတယ်ဆိုတာ တံဆိပ်ခေါင်းတက်ပြီးစွဲရတာ။ အခု တံဆိပ်ခေါင်းခွန်တွေကို အဆ (၁၀၀)လောက်တိုးပြီးသတ်မှတ်လိုက်တော့ ပြည်သူတွေအတွက်တော်တော်လေး နှစ်နာမှုတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ပြောင်းလဲလိုက်သော ရုံးခွန်များတွင် ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်စာမှာ ယခင် (၅)ကျပ်မှ ယခု (၅၀၀)ကျပ်သို့ လည်းကောင်း၊ ရုံးသုိ့လျှောက် လွှာမှာ ယခင် (၅)ကျပ်မှ ယခု (၅၀၀)ကျပ်သို့လည်းကောင်း၊ တရားမမှုစွဲဆိုပါက (အများဆုံး)ယခင် ကျပ်(၁၅၀၀၀) မှ ယခု ကျပ်(၁၅၀၀၀၀၀) သို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲသွားကြောင်းနှင့် အလားတူ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များကိုလည်း အဆ ၁၀၀ အထိ (ဥပမာ- သဘောတူစာချုပ် ယခင်(၆)ကျပ်မှ ယခု ၆၀၀ကျပ်)ထိုးမြှင့်မူများရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအသိုင်းဝိုင်းထဲက အမှုတစ်ခု ဖွင့်မလို့ဆိုပြီး တရားရုံးတော့ ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ ရှေ့နေ တွေကလည်း တရားစွဲရင်တံဆိပ်ခေါင်းတပ်ပြီးဆွဲ ရတယ်။ အဲတံဆိပ်ခေါင်းကြေး ဘယ်လောက်၊ ရုံးခွန်ကဘယ် လောက်ဆိုပြီး ရှင်းပြတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းက ကုန်ကျမယ့် ပိုက်ဆံတွက်ပြီးတော့ မတိုင်ခဲ့ရပဲ ပြန်လာခဲ့ရ တာမျိုးတော့ ကြုံခဲ့ဘူးတယ်” ဟု တာမွေမြို့နယ်မှ ကိုဇော်မင်းဌေးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကို ၁၈၇၀ ခုနှစ် ဧပြီ(၁)ရက်နေ့နှင့် တံဆိပ်ခေါင်ခွန်အက်ဥပဒေကို ၁၈၉၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၉၅၇) ခုနှစ်၌ အဆိုပါအက်ဥပဒေများကို အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ကာ (၁၉၅၈)ခုနှစ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း(လုံးဝ)မပြုဘဲ ရုံးခွန်အက်ဥပေဒ ကိုသာ အပိုဒ်(၂)တွင် အနည်းငယ်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုနောက် ရုံးခွန်အက်ဥပဒေနှင့် တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းများကို (၁၉၆၂)ခုနှစ် မှ (၁၉၈၈)ခုနှစ် အထိ ပြင်ဆင်မူလုံးဝမတွေ့ရှိခဲ့ရပဲ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင်သာ ဥပဒေအမှတ် ၆/၉၀ နှင့် ၇/၉၀ အရ အဆိုပါ အက် ဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
6/05/2012 01:57:00 PM
ရှုမ၀အောင်(မြစ်မခ)by Myit Makha Mediagroup on5Jun, 2012လှိုင်သာယာစက်ရုံများတွင် အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှုများမှာ (၁)လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း စက်ရုံ(၁၅)ရုံဝန်းကျင်မှာ ယခုတိုင် ပြေလည်မှုမရရှိသေးကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ဆန္ဒပြမှုများပြေလည်နိုင်ရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒု-၀န်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးညွှန်ကြားရေမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်၊ အလုပ်သမားညွှန် ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားချုပ်ဦးမျိုးအောင် နှင့် (၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးတို့မှညှိုနှိုင်းဖြေရှင်းပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “အချင်းချင်းညှိုနှိုင်းရန်အရေးကြီးတယ်။ ဟန်ချက်မပျက်သွားစေချင်ဘူး။ ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ဖြည်သလို ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူး။”ဟု အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒု-၀န်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းကပြောသည်။လက်ရှိအချိန်အထိ ပြေလည်မှုရရှိသွားသော လှိုင်သာယာစက်ရုံများမှာ UNNO Myanmar Yes, စံပယ်ပွင့်၊ ပုလဲ၊ Global Footwear၊ နေမင်းအောင်၊ YJ၊ MO-Z၊Lucky Shoes၊ Asia Roseနှင့် Hall Markစက်ရုံများဖြစ်ပြီး၊ ရွေပြည်သာမှ Grand Royal၊မြောင်းတကာ သံမဏိစက်ရုံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။အလုပ်သမားများတောင်းဆိုသော အခြေခံလစာကို တတ်နိုင်သလောက်ညှိုနှိုင်းပေးရန် သံမဏိစက်ရုံကဲ့သို့ အလုပ်ရှင်အလုပ် သမားညှိုနှိုင်းအဆင်ပြေမှုရရှိစေလိုကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ရှင်းပြသည်။၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၆၅ ရုံ၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အလုပ်ရုံ ၃၀၀ ကျော် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အလုပ်သမား နှစ်သိန်းခွဲခန့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေးနိုင် ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်မူ လုပ်ငန်းများပြန်လည်ကျဆင်းလာ၍ ရှစ်သောင်းခွဲခန့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး လျော်ကြေး ပေးကာ အလုပ်ထွက် ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ဥက္ကဌ ဦးမြင့်စိုးက ဆိုသည်။အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အား တစ်ရက်လုပ်ခ တစ်ထောင်ကျပ် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမြင့်စိုးက ဆက်ပြောသည်။စက်ချုပ်အလုပ်သင်တယောက်အနေနဲ့ တစ်လလျှင် လုပ်အားခ ခြောက်သောင်းခြောက်ထောင်ငါးရာနှင့် အလယ်လတ်တန်းစား လူတယောက်အနေနဲ့ စက်ချုပ်အလုပ်သင်တယောက်အနေနဲ့ တစ်လလျှင် လုပ်အားခခြောက်သောင်းခြောက်ထောင့် ငါးရာနှင့် အလယ်လတ်တန်းစား လူတယောက်အနေနဲ့ ခုနှစ်သောင်းသုံးထောင် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အထည်ချုပ်ဥက္ကဌက ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေး ခဲ့သည်။“ကျမတို့ ဒီလုပ်ခနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အရင်တုန်းက အချိန်ပိုးကြေးမရှိတာတောင် လေးသောင်းရှစ်ထောင် ရပါတယ်။ အခု အချိန်ပိုကြေးမပါရင် နှစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ရတယ်ဆိုတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။” တိုင်ရီဖိနပ် စက်ရုံက မမိုးဝေကပြောသည်။ အဆိုပါညှိုနှိုင်းမှုသည် မနေ့က ဇွန်လ(၄) ရက်နေ့ထိ ပြေလည်မှုမရရှိခဲ့သဖြင့် ဆက်လက်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်း မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံရှိ စက်ရုံ(၁၅)ရုံခန့်မှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ပြေလည်မှု မရှိသေးကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ အချိန်ယူရမည်ဟု မြန်မာကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး တုံ့ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က နေရာယူအုပ်ချုပ်ထားတာ အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်တွင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း စစ်တပ်က ပါဝင်နေတဲ့အပေါ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှော့ချသွားမယ်၊ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကိုလည်း စစ်တပ်က ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုခဲ့ပေ မယ့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကတော့ ဒီအပေါ်မှာ သံသယရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့
လက်ရှိနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေဟာ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးသလို လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာ တည်နေ သလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်ပြီး တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ အာရှဒေသ၊ လုံခြုံရေးညီလာခံမှာ မြန်မာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း တက်ရောက်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာ စစ်တပ်ရဲ့ သဘောထားကို တတ်ရောက်လာသူအချို့က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါ တယ်။ စစ်တပ်အနေနဲ့ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပြုလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ သလို လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင်း စစ်တပ်က ၂၅ % နေရာယူထားတာကိုလည်း တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချ သွားဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်း စကားပြန်ကတဆင့် ပြောသွားပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲ ၂၅ % ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဥပမာ အားဖြင့် ရေချိုထဲကငါးကို ရုတ်တရက် ရေငန်ထဲကို ထည့်လို့မရသလို အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အချိန်တော့ယူရပါမယ်၊ အခုဖွဲ့စည်းပုံပါ ၂၅ % တပ်က နေရယူထားတာဟာ အသေဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အချက်အလက်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်၊ သင့်လျော်တဲ့အချိန် ကျရင်တော့ ၂၅ % ပါဝင်မှုကို လျှော့ချပြီး အပြောင်းအလဲတွေ
ရှိလာမှာပါ ဆိုပြီးတော့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းက ဖြေဆိုသွားတာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာစစ်ဘက် အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေး သုံးသပ်လေ့လာသူ တဦးဖြစ်တဲ့
ဦးဌေးအောင် ကတော့ အခုလို ကတိပေး ပြောဆိုမှုတွေအပေါ်မှာ သံသယရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အပြောင်း အလဲတွေ၊ ဒီလို ပြောဆိုချက်တွေဟာ တစ်ခုလုံးကို တကယ်
ကိုယ်စားပြုရဲ့လား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပေါ်မှာ တည်သလိုဖြစ်နေသလားဆိုတာ သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သတိထားပြီးတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးစောမောင်ကလည်းပဲ အလားတူပဲ ဦးစီးချုပ်ဖြစ်စဉ်ကာလ န၊ဝ၊တ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စဉ်ကာလက ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်
စစ်တန်းလျားကိုပြန်ပါမယ်လို့ ကတိတွေပေးခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီကတိတွေက သူနဲ့အတူ ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ အခုလည်းပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းပဲဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ပဲဖြစ်စေ- နောက်ပြီးတော့ ဦးရွှေမန်းပဲဖြစ်စေပေါ့လေ- သူတို့က ခေါင်းဆောင်တွေ ပီပီပေါ့နော် ကတိကဝတ်တွေ ပေးထားပေမဲ့ တချိန်ချိန်ကျလို့ရှိရင် တပ်မတော်က အမျိုးမျိုးကြောင့် အာဏာပြန်သိမ်းဖို့၊ နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ဖို့ ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ကတိစကားတွေက သူတို့နဲ့အတူတူ ပါသွားတဲ့ သဘောမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာပဲ။”
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ခွန်ထွန်းဦးကတော့ အာဏာပိုင်တွေအတွင်းမှာကို တဦးနဲ့တဦး အပြောအဆိုတွေ မညီညွတ်သေးတာကြောင့် အခု အပြောင်းအလဲဆိုတာဟာလည်း ခိုင်မာပါ့မလား စိုးရိမ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော့်အထင်ပြောရရင်တော့ စိတ်ချရလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ မရောက်သေးဘူးဗျ။ အထူး သဖြင့် တိုင်းရင်းသားတွေ ဆွေးနွေးတာဟာ တကြောင်း၊ တဂါထာ၊ တရွာ၊ တပုဒ်ဆန်းဖြစ်နေ တယ်။ ပြောတာဆိုတာတွေက မညီညွတ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးက စိတ်ချရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ရမှသာလျှင် ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီတော့ အခုလို ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ယူတဲ့နေရာမှာ စိတ်မချနေရလို့ရှိရင် အမေရိကန်ဆီက လက်နက်တွေယူပြီးတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကို ပြန်တိုက်နေရင် ကျနော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဲဒါက စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။”
အာရှလုံခြုံရေးညီလာခံကို အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လီယွန် ပန်နက်တာလည်း တက်ရောက်နေ တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့် ပိုပေးလာမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာကြား စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေမဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကို ဆွေးနွေးသွားဖို့
အမေရိကန်ဘက်က လိုလိုလားလားရှိတယ်လို့ မစ္စတာ Panetta က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဦးဌေးအောင်ကတော့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ပိုပြီး နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံလိုတဲ့ သဘောထား ရှိနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်က မြန်မာစစ်တပ်ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
“သူတို့အနေနဲ့ အစကတည်းကကို မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့ စစ်ပညာသင်ချင်တာမျိုးတို့၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပဲ သွားပြီးတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေက စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေတင်မကဘဲနဲ့ အနောက်နိုင်ငံထုတ် ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူချင်တာမျိုးတို့၊
သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကိုလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပဲ ပညာသင်စေချင်တာမျိုးတို့ ဒါမျိုး အနောက်နိုင်ငံတွေကို သူတို့အနေနဲ့ အထင်ကြီးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခု အမေရိကန်နိုင်ငံက လာပြီး ဗမာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို အခုလိုပေါ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ အများကြီးကောင်းတယ်လို့ပဲ ကျနော်က ယူဆပါတယ်။”
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ စစ်အုပ်စုအတွင်း အပြောင်းအလဲကို လက်မခံတဲ့ သဘောထား တင်းမာသူတွေ ရှိနေဆဲပဲလို့ လေ့လာသူတွေက ယူဆနေကြတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကလည်း စူးစမ်းနေပုံရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကချင်ဒေသ မှာ အပစ်ရပ်ဖို့ သမ္မတက ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပေမဲ့ စစ်တပ်ကလိုက်နာမှုမရှိဘူးလို့ ယူဆချက်တွေကြောင့် စစ်တပ်ဟာ အပြောင်းအလဲမှာ အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မြင်နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့ စစ်တပ်အနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အပြည့် အ၀ထောက်ခံပါတယ်၊ မြန်မာ့စစ်တပ်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ အစိုးရကို ပုန်ကန်တာမျိုး မရှိခဲ့ဘူး လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
By ကိုသားညွန့်ဦး (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း)
6/05/2012 01:51:00 PM
နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ ကနေ (၁၈) ရက်နေ့အထိ သွားရောက်မယ့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံခရီးစဉ် အချိန်ဇယားကို နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီး နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အခုလို သူရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံပြီး နော်ဝေနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်မှာကို ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နော်ဝေနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို လက်ခံရယူနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်အလွန်ပဲ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုကို နော်ဝေနိုင်ငံက နှစ်ပေါင်းများစွာ အားပေးထောက်ခံခဲ့သလို လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်လို့” နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံ Oslo မြို့ကို ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့မှာ ရောက်လာမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဲဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းမှာ နော်ဝေး၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်ကြီးချုပ်က ညစာစားပွဲနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့မှာ နိုဘယ်လ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းမှာ နော်ဝေရောက် မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။ ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့မှာတော့ ဘာဂန်မြို့ကို လာရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေသူ မကေသီအောင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
" ဘာဂန်မြို့မှာကျတော့ ဒေါ်စုကို ပထမဦးဆုံးသော နိုင်ငံတကာဆုဖြစ်တဲ့ ရက်ဖ်တို လူ့အခွင့်အရေးဆုကိုပေးခဲ့တဲ့ ရက်ဖ်တိုဖောင်ဒေးရှင်း၊ ဒေါ်စုမကြာခဏကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်။ အဲဒီဖောင်ေးဒရှင်းကို ဒေါ်စုလာလိမ့်မယ်တဲ့။ ပြီးတော့
ဘာဂန်မြို့မှာ ရှိနေတဲ့ ဗမာတွေအားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေး တခုလုပ်မယ်။ ဒေါ်စုကလည်း မိန့်ခွန်းပြောမယ်။ ဒေါ်စုကိုပြန်လည် မေးခွန်းထုတ်တာ၊ ဒေါ်စုနဲ့ပေါ့လေ၊ ဘာတွေ တိုင်းပြည်အတွက် အကူအညီပေးနိုင်မလဲလို့ ဒီမြို့ကလူတွေနဲ့ စကားပြောမယ်။ အဲဒီဟာကတော့ နာရီဝက် တစ်နာရီလောက်ပဲရှိမယ်။ အဲဒါပြီးလို့ရှိရင် ဒေါ်စုက ဗမာတွေရော၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီဘာဂန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ နော်ဝေလူမျိုးတွေကိုရော မြို့လယ်မှာ ဒေါ်စုက မိန့်ခွန်းပြောမယ်"
နော်ဝေခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဇွန်လ (၁၈) ရက်နေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နော်ဝေလွှတ်တော်ကို သွားရောက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကာကွယ်ရေးကော်မတီဝင်တွေကို တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6/05/2012 01:48:00 PM
ခမောက်ကြီးမြို့နယ် အေးချမ်းသာရပ်ကွက်တွင် မြစ်ရေလျှံပြီး နေအိမ်များနှစ်မြုတ်
၅ ဇွန် ၂၀၁၂ ကော့သောင်းခရိုင်၊ခမောက်ကြီးမြို့နယ်၊အေးချမ်းသာကျေးရွာတွင် မြစ်ရေလျှံပြီး ကမ်းနားနေ နေအိမ်အချို့ ရေ နှစ်မြုတ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ရွာခံတစ်ဦး၏ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ ရေထပတ် နှင့် မိုးများအဆက်မပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပါချန်မြစ်ရေလျှံကာ မြစ်ကမ်းနဘေးရှိ ရဲစခန်း အပါဝင် လူနေအိမ် အချို့နှစ်မြုတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အေးချမ်းသာကျေးရွာနေ ဒေါ်နွဲ့ကပြောပါတယ်။ ရွာခံဒေါ်နွဲ့က“မနေ့(၄.၆.၂၀၁၂)ကတည်းက မြစ်ရေကလျှံနေတာ(၅.၆.၂၀၁၂)ရက်နေ့မှာတော့ အေးချမ်းသာရဲစခန်းအပါဝင် အိမ်ခြေ လေးဆယ်ကျော်လောက်ရှိမယ် လုးံလုးံကိုမြုတ်တာ ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေ ကိုတော့ အေးချမ်းသာရွာဦးကျောင်းရှိ ဓမ္မာရုံနှင့် ရွာအထက်ပိုင်းရှိ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအိမ်မှာ တည်းကြတယ်” ဟုပြော ပါတယ်။နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီတွင် ရွာခံပြောကြားချက်အရ ဒုက္ခသည်များတည်းခိုရာ ရွာဦးကျောင်းအထိရေများဝင်လာပြီး ဓမ္မာရုံကျမ်းပြင်အထိ ရေရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စားရေးသောက်ရေးကိစ္စကိုတော့ ရွာမှ အရန်မီးသတ်များနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မှ လိုက်လံကူညီမှုများ ရှိတယ်လို့ သိရပြီး အကူညီများလည်းထပ်မံ လိုအပ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အေးချမ်းသာရပ်ကွက် သည် ထိုင်းနိုင်ငံ နာမ်မကျော့ရပ်ကွက် နှင့် ပါချမ်မြစ် တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တည်ရှိပြီး ပါချမ်မြစ်တစ်လျှောက် တွင်ရှိသော မြန်မာပိုင် မာရမ်း၊ဖေါ့ဆုတ်၊ဆိပ်ဖူးကျေးရွာများတွင်လည်း မြစ်ရေလျှံ မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေသည်ဟု သိရှိရပြီး ပျက်စီးဆုးံရှုးံမှုကိုမူ အတည်မပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
6/05/2012 01:45:00 PM
ဇေကမ္ဘာနှင့် လယ်သမားများ မြေယာအငြင်းပွားမှု ယနေ့ စစ်ဆေးမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီနဲ့ ရွှေနံ့သာ လယ်သမားတွေရဲ့ မြေယာ အငြင်းပွားမှုကို ယနေ့စတင် စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရွှေနံ့သောကျးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှာ လယ်သမား ၆ ဦးကို မနက်ကိုးနာရီ စတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို တက်ရောက် နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
လနဲ့ချီပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေကြတဲ့ မြေဧက ၈၁၅ ဧကကို ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီနဲ့ လယ်သမားတွေက သီးစားစိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့ အပြိုင်လျှောက်ရာမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ပြိးခဲ့တဲ့ မေ ၂၁ရက်နေ့မျာ ကုမ္ပဏီကို သီးစားချထားပေးခဲ့ပါတယ်။ ခရိုင်အဆင့် ရပ်ကွက် ကျေးရွာအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေထံကတဆင့် မေလ ၂၇ရက်နေ့မှာ လယ်သမားတွေ သိခဲ့ရတာဖြစ်ပြိး မကျေနပ်တဲ့အတွက် လယ်သမားတွေက မြေယာကော်မတီထံမှာ မြေယာမှုခင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာ ကျေးရွာမြေယာကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဌတာဝန်ဖြစ်တာကြောင့် တာဝန်ယူစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်စတင် စစ်ဆေးမယ်ဆိုတာ အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ ဒီလယ်မြေအငြင်းပွားမှုကိစ္စမှာ လယ်သမားတွေဘက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူ ဦးနေမျိုးဝေက ပြောါပတယ်။
´´ဒီနေ့ပဲအကြောင်းပြန်တယ်။ ယနေ့ ကို မနက်ပိုင်း ၉နာရီမှာ ၆ဦးစစ်မယ်။ အဲဒျီေကးရွာရုံးမှာပဲ စစ်မယ်။ ညနေ၂နာရီထိုး နောက်၆ဦး ထပ်စစ်မယ်။ တနေ့ကို ၁၂ယောက်နှုန်းနဲ့ လယ်သမား ၈၀ကျော်ကုန်တဲ့အထိ စစ်မယ်။
လယ်သမားတွေက ဒီလယ်မြေတွေပေါ်မှာ ဒီနေ့ ထယ်တိုးနေကြတယ်လို့ ဦးနေမျိုးဝေက ပြောပါတယ်။
´´လယ်သမားတွေ ဒီနေ့ ထယ်တွေထိုးတယ်။ အဲဒါကလည်း မြေယာဥပဒေအရ ၁၉၆၃ခုနှစ်တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေပိုဒ် ၃၊နည်းဥပဒေ၃(ခ)မှာ တောင်သူလယ်သမားတွေကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ထဲကို မ၀င်ရဆိုပြီးတားမြစ်ခြင်း မပြု၊ တောင်သူလယ်မားတွေ လယ်မလုပ်ရဘူး မတားရဘူး။ (က)မှာ တောင်သူလယ်သမားတွေ လယ်လုပ်ကိရိယာတွေကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းမပြုရ၊ တရားရုံးတခုခုကနေ ၀ရမ်းမကပ်ရ၊ အဲဒါပါတယ်´´
ဒီမြေကို အစိုးရက သိမ်းမယ်လို့ ကောလာဟလတွေပျံနှံနေချိန်မှာ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ကြားဝင် ကရုဏာကြေးပေးပြီး စက်မှုဇုန်တည်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် လယ်သမားတွေက နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ လှည့်ဖြားခံရတယ်လို့ ယူဆပြီး လယ်လုပ်ခွင့် ပြန်တောင်နေတာဖြစ်သလို ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီကလည်း လယ်ပဲစိုက်တော့မယ်ဆိုပြီး ရပ်တည်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
by အေးနိုင် (ဒီဗွီဘီ)
6/05/2012 08:42:00 AM
ကလေးဝမြို့နှင့်ခုနစ်မိုင်အကွာ ချောင်းကျဉ်းကျေးရွာ အနီးတွင် ရေနံမှော်အသစ်ပေါ်
ကလေးဝမြို့နှင့် ခုနစ်မိုင်အကွာ ချောင်းကျဉ်းကျေးရွာအနီးတွင်
မတ်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ ရေနံမှော်အသစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
ကလေး-ကလေးဝကားလမ်းဘေးရှိ ပိတောက်စိုက်ခင်း၊ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအနီး
တွင်တည်ရှိကာ လာရောက်တူးဖော်သူများဖြင့် စည်ကားနေကြောင်း သိရသည်။
( မှော်ကတော့ မတ်လဆန်းပိုင်းလောက်က စပေါ်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့
ဒီမေလထဲကမှ ရောက်ခဲ့တယ်။ ပေါ်ကာစကတော့ အတောင်ရေ တစ်ရာအောက်လောက်နဲ့လည်း
ဆီတွေ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျင်းကရေရှည်မခံဘူးလေ။ ဒီတော့
ကျင်းနက်နက်လိုက်ကြတယ်။ ခုတော့ အနည်းဆုံးတောင်ရေ ၂၅၀ ကနေ ၃၅၀ လောက်ထိ
လိုက်ကြတာတွေ့ရတယ်။ ပေါက်နေတဲ့ ကျင်းတွေထဲမှာတော့ တစ်ရက်ကို ပေပါ ၆
လုံးရနေတဲ့ကျင်းက တစ်ကျင်းရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ကျင်းတွေလည်း
အနည်းအများခပ်နေကြရတာပါပဲ။ မနေ့ကပဲ အတောင် ၂၈၀ နဲ့ တစ်ရက်ကို
နှစ်လုံးလောက်ခပ်ရမယ့် ကျင်းတစ်ကျင်းပေါက်သွားတယ် ) ဟု
ရေနံမှော်တွင် လက်ရှိ ကျင်းပေါင်း ၁၀၀ ခန့် တူးဖော်နေကြပြီး
ကလေးဝမြို့နယ်နှင့် ကလေးမြို့နယ်အတွင်းမှ လာရောက်တူးဖော်နေကြပြီး
အများစုမှ ရေနံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်ပြီး အခြားမှော်များမှ
ရွှေ့ပြောင်းလားကြသူများဖြစ်သည်။ ရေနံဈေးနှုန်းမှာ တစ်ပေပါလျှင် ကျပ်
တစ်သိန်းတစ်သောင်းဈေး ပေါက်နေပြီး မှော်အမည်ကို ခုနစ်မိုင်မှော်ဟု
မှော်တည်ရှိရာမှာ မြစ်သာမြစ်နှင့် တစ်မိုင်ခန့်အကွာ
တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ဖြစ်ပြီး နွေရာသီ ရေရှားပါးမှုကြောင့် မှော်သားများမှာ
ကျင်းအတွက်သုံးရေနှင့် လူသုံးရေ၊ ချိုးရေတို့ကို မြစ်အတွင်းသို့
( ဒီမှာက ရေပဲရှားတယ်။ တောင်ကျချောင်းရေကလည်း သိပ်မရှိတော့
မြစ်ထဲသွားခပ်ရတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရတာပေါ့။ နောက် ကျင်းတွေမှာ
စက်မောင်းဖို့နဲ့ ရေထုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်း ရေက မရှိမဖြစ်လိုနေတော့
တစ်ရက်ကို မြစ်ထဲ လေးငါးခေါက်ဆင်းနေရတယ် ) ဟု မှော်သားတစ်ဦးမှ
လနဲ့မြ - မြန်မာပို့ စ် ဂျာနယ်
6/05/2012 08:32:00 AM
ကော့သောင်းမြို့နယ်တွင် ပေါက်ကွဲသံကြီးတစ်သံနှင့် ငလျှင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွား
ဇွန် ၄ ရက် ၂၀၁၂
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်တွင် ယနေ့နေလည် ၁၂ နာရီ ၁၇ မီနစ်ခန့်တွင် ပေါက်ကွဲသံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီး ကော့သောင်းတစ်မြို့နယ်လုးံ
စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ ငလျှင်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုဖြစ် ပွားခဲ့ပါတယ်။
၄င်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပက်သက်ပြီး ကော့သောင်းမြို့နယ်ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊
ကမ်းနားပိုင်း တွင်နေထိုင်သော အသက် ( ၇၅) နှစ်အရွယ် အဘွားအိုတစ်ဦးမှ သူ့သက်တမ်းတလျှောက် ဒီလိုပေါက်ကွဲပြီး မြေကြီးလှုပ်ခက်တာ တခါမှမကြုံဖူးဘူး မြေပြိုသံလိုပေါက်ကွဲသံကြားပြီး ငလျှင်လှုပ်လိုက်တော့ ဆူနာမီများဖြစ်လာမလားဆို
ကော့သောင်းမြို့နေ လူလတ်ပိုင်းတစ်ဦးကလည်း ကျွန်တော်ကော့သောင်းမှာနေတာ
အနှစ် (၂၀) ရှိပြီ ဒီလိုဖြစ်တာ ဒီတစ်ခါပဲကြုံဖူးတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက သဲ စုပ်
သင်္ဘောကြီးတွေက ကော့သောင်းနဲ့အနီးကပ် သဲစုပ်ယူမှုတွေကရှိတော့ တစ်ချို့ကျေးရွာ
တွေလည်း မြေပြိုမှု တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီ အခုလည်း ဒီသဲစုပ်သင်္ဘောတွေသဲစုပ်ယူမှု
ကြောင့် မြေအောက်လိုင်ခေါင်းတွေဖြစ်ပြီး ပြိုကျ ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပြီလားလို့ စိုးရိမ်မီတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
၄င်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပက်သက်ပြီး အဏာပိုင်များမှ တစုံတရာ ထုပ်ပြန်
ကြေညာခြင်း မရှိသည့်အပေါ် မြို့ခံများမှ ထင်မြင်ချက် အမျိုးမျိုးဖြစ်ကာ စိုးရိမ်စိတ်များ
ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း ကော့သောင်းမြို့ ခံတဦးက သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
6/05/2012 06:25:00 AM
ရမည်းသင်းခရိုင် မိုးထိမိုးမိတောင်က ရွှေတွင်းတွေမှာ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရေး အတွက် အလုပ်သမား ဦးရေ သုံးသောင်းကျော်ဟာ ၃ ရက်မြောက်နေ့အဖြစ် ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့ ကုမ္ပဏီကြား ညှိနှိုင်းတာတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ပြေလည်မှု မရသေးပါဘူး။ အလုပ်သမားတွေ ဘက်ကတော့ သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေမရမချင်း ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ ဒီရွှေတွင်းမိုင်းတွေကို အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ
လုပ်ကိုင်ဖို့ စီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည် ဖော်တာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ မသင်းသီရိက အပြည့်အစုံ တင်ပြထားပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရမည်းသင်းခရိုင်ရဲ့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၃၀ အကွာလောက်မှာ ရှိတဲ့ မိုးထိမိုးမိ ရွှေတွင်းဒေသက ရွှေတူးတဲ့မိုင်းတွင်းတွေမှာ
ဦးရေ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြတာ ဒီကနေ့ဆိုရင် သုံးရက်ဆက်တိုက်
ရှိနေပါပြီ။ အဓိက ကတော့ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဆက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မပေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၃ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ ကုမ္ပဏီဘက်က တာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ အလုပ်သမားတွေ ညှိနှိုင်းတာ ရှိပေမဲ့ အဆင်ပြေမှု မရသေးဘူးလို့ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
“လူအင်အားကတော့ သုံးသောင်းကျော် ငါးသောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့လေ။ ဒီအင်အားလောက်နဲ့ ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြနေတာပေါ့နော်။ သူတို့က ၇ ရက်နေ့ကျရင် တိကျတဲ့အဖြေကို ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး အခု ကျနော်တို့ကို အဲဒီလို ပြန်ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ ပြောတာပေါ့နော်။ ၇ ရက်နေ့အထိ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ လုပ်သားတွေ ခံစားခွင့်ကို အရင်အတိုင်းရရှိရေး၊ အဲဒီလောက်ပါပဲ ကျနော်တို့တောင်းဆိုတာက။ သိပ်အထွေအထူး မများပါဘူး။”
ဒီပြဿနာဟာ မေလဆန်းကတည်းက လုပ်ငန်းငယ်တွေကို ရပ်ပစ်ကတည်းက ဒီမိုင်းတွင်းတွေမှာ စဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်တာကြောင့် သောင်းနဲ့ချီတဲ့ အလုပ်သမားတွေ စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေကတော့ သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေကို မရမချင်း ဆက်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြသွားမှာဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ဌာနတွေဆီကိုလည်း တင်ပြဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“တစ်လကျော်နေပါပြီ။ သူတို့က ဟိုလိုလျှော့လိုက်၊ ဒီလိုလျှော့လိုက်နဲ့ အဲဒီလို လျှော့ လျှော့ပြီးတော့ လုပ်လာခဲ့တာ ကနေ့ အချိန်အထိပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ဆိုရင် ဒါ အကုန်ရပ်ထားရတာဗျ။ လူ ငါးသိန်းလောက်ကတော့ အကုန်လုံး အခက်အခဲဖြစ်သွားမှာဗျ။ အခု ကျနော်တို့ဆိုရင်ပဲ ကိုယ့်နေရပ်ကို ပြန်ပို့တဲ့သူက ပို့ခံရတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို မရမချင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေကို နေပြည်တော်ရယ်၊ ရန်ကုန်အထိမှာပါ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်။”
သတ္ထုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနကနေ ကွန်ထရက်ယူထားတဲ့ အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး
ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းအောင်စိုးကတော့ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကနေ အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေကို ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည် ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒီစီမံကိန်းတွေအကြောင်း လုပ်ငန်းငယ်တွေကိုလည်း ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာ ဖြစ်သလို သူတို့ကိုလည်း ၇ လ
လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးပြီးသားဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒီနေ့လည်း ကျနော် သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သူတို့က သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က နိုင်ငံတော်ကို ၇၃ ပိဿာပေါ့။ ငါးနှစ်ဆိုရင် ၅.၅၇
ပေးသွင်းရမှာပေါ့နော်။ နှစ်ရှည်လည်း လုပ်ရမယ့်ဟာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မိုလို့ ဒီလို အသေးစားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ခွဲ နှစ် နှစ်တွင်းမှာ ဒီမိုင်းကြီးက ဆက်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်သွားရင် နိုင်ငံတော် အတွက်လည်း နစ်နာမယ်ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ကျနော်တို့က ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆိုရင် ဘယ်လို သူတို့အနေနဲ့ အာမခံချက် ပေးမလဲ၊ ဒါလည်း သူတို့ကို ကျနော်တို့ မေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။”
အခု ဒီမိုင်းတွင်းက အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကို အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်သမားတွေနဲ့ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမှာ ဖြစ်သလို အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်း ကုမ္ပဏီဘက်က ကူညီနိုင်ဖို့တွေကိုလည်း စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဆက်ပြီးတော့ ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့မှာ အခု လုပ်ကွက်ကြီးထဲမှာ ရွှေစင် ရယ်၊ ထုံးကြီးရယ် ဆိုပြီးတော့ လုပ်ကွက်ကြီး နှစ်ခု ရှိတယ်။ ဒါကတော့ ကုမ္ပဏီ လုပ်ကွက်ကြီးတွေပေါ့နော်။ ကျန်တဲ့ဇုံတွေမှာ ဇုံ ၁၂ ဇုံ ရှိပါတယ်။ တခြားဇုံတွေမှာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လက်အောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စောစောကပြောသလို အစုစားသော်လည်းကောင်း၊ လခစားသော်လည်းကောင်း သူတို့ လုပ်လို့ရတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။”
ဒီရွှေတွင်း လုပ်ကွက်တွေကို အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ကန်ထရိုက် စယူထားတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ငါးနှစ်သက်တမ်း စာချုပ်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု မိုးထိမိုးမိဒေသမှာ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေက ၃၆ ခုမက ရှိနေပြီးတော့ ဧက ၂၀ ကျယ်ဝန်းတဲ့ လုပ်ကွက်တကွက်ကို တနှစ်ကို ရွှေ ၂၄ ကျပ်သား ပေးဆောင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
By မသင်းသီရိ - (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း) သစ်ထူးလွင်
6/05/2012 06:18:00 AM
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ ရွာသားများ မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာကြောင့် ဆန္ဒပြ
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးမှုတစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါဘဲ၊ ဆန္ဒပြနေသူများအား မထီမဲ့မြင်ပြု လုပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့ နယ် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီသတ္တုတူးဖေါ်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်က ထွက်တဲ့ စွန့် ပစ်မြေစာတွေကို အနီးတ၀ိုက်က လယ်မြေတွေပေါ်မှာ စုပုံတဲ့ အတွက် စိုက်ပျိုးမြေတွေ ပျက်စီးရတာကို ဒေသခံရွာတွေက ဇွန်လ (၃) ၂၀၁၂ နေ့ က နေ့ ရောညပါ အဲဒီ စီမံကိန်းဆိုက်ထဲ မှာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။၀က်မှေး ၊ ကန်တော ၊ ဆည်ထဲ ၊ ဇီးတော ၊ အောင်ချမ်းစည် ၊ ကျော်ရွာ ၊ ဖေါင်းကား ၊ ရွှေလှေ ၊ ကျွန်တောချောင်း စတဲ့အနီးတ၀ိုက် က ရွာတွေက ဒေသခံ အင်အား ၇၀၀ ကျော် ပါဝင် ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ဆန္ဒပြနေကြတာကို တရုတ်လူမျိုး ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်း က ဒေသခံရွာသားတွေကို အကြမ်းဖက်သလို ရိုင်းပြတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ လည်းစော်ကားတယ်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို အာဏာပိုင်တွေက မလိုက်လျော မချင်း နေ့ ရောညပါ ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေက Myanmar News Now ကို ပြောပြကြ ပါတယ်။
မုံရွာမြို့ - အနောက်ဘက်ကမ်း လက်ပန်းတောင်း သတ္ထုစီမံကိန်းအနီး ကျေးရွာများမှ ပြည်သူများသည် မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာကြောင့် ယခုထိဆန္ဒပြနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ဓါတ်ပုံ-Thit Ywet Nge
6/05/2012 06:07:00 AM
နူကလီးယား အစီအစဉ်အားလုံး ဖျက်သိမ်းထားကြောင်း မြန်မာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော
မြန်မာအစိုးရရဲ့ နူကလီယား သုတေသန အစီအစဉ်အားလုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းက စနေနေ့က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာရှလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းက စကားပြန်ကနေတဆင့် ရှင်းလင်းပြောခဲ့တာပါ။ မြန်မာအစိုးရဟာ မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ အကူအညီနဲ့ နူကလီးယား လက်နက်တည်ဆောက်ဖို့ နည်းပညာ အကူအညီ ရယူခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာနIISSက မြန်မာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကြိုဆိုလိုက်သလို တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း နူကလီးယား လက်နက်အစီအစဉ် လုံးဝ ကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အနူမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ အိုင်အေအီအေ ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူဖို့ လိုအပ်ကြောင်း IISS အဖွဲ့ရဲ့ နူကလီးယား လက်နက်မပြန့်ပွားရေး နဲ့ ထိမ်းချုပ်ရေး ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Mr. Mark Fitzpatrick က ပြောပါတယ်။အိုင်အေအီးအေ အဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ဟာ မြန်မာအစိုးရမှာ စစ်ရေးဆိုင်ရာ နူကလီးယားအစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ အိုင်အေအီးအေ အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို လက်ခံဖို့ရှိပါသလားလို့ မေးရာမှာ မြန်မာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အနေနဲ့ သဘောမပေါက်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အိုင်အေအီးအေ အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို လက်မခံလိုတာကြောင့်လား တော့မသိဘူး။ မိမိတို့မှာ နူကလီးယားအစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ဘာမှအတည်ပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ အိုင်အေအီးအေလည်း လာရောက် စစ်ဆေးစရာမလိုပါဘူးလို့ မိမိမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ကြောင်း IISS အဖွဲ့က မစ္စတာ Mark Fitzpatrick က ပြောပါတယ်။မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံပြီး၊အရပ်သားအစိုးရရဲ့အမိန့်ကို ဆက်လက်နာခံ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းက အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ ပြောပါတယ်။အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး LeonPanettaကလည်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်သွားမယ် ဆိုရင် အမေရိကန် အနေနဲ့မြန်မာနဲ့ စစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်သွားမယ်လို့ ဒီညီလာခံမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။အာရှလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံကို နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး ဌာနကကြီးမှူးပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း၂၇ နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ကြပါတယ်။
6/05/2012 05:44:00 AM
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ၀ါရှောင်ကျေးရွာတွင် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်
ဂျာတော့(ပ်) (မြစ်မခ)by Myit Makha Mediagroup on4Jun, 2012ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ ဝါရှောင်ကျေးရွာတွင် ည(၇)နာရီအပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရှိရသည်။ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းကြောင့် ဒေသခံလယ်သမားများအခက်အခဲကြုံနေရကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။ “ထယ်ထိုးတာ၊ မြေဆွဖို့ဆိုတာ.. ကျွဲ၊ နွားတွေနဲ့ မနက်အစောကြီးထွန်ကြရတာ။ အခုက လယ်နဲ့ဝေးတော့ လယ်မှာ အိပ်ရမလား။ အိပ်မယ်ဆိုလည်း မအိပ်ရဲဘူး။ ညပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်း မရဆိုတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။” ဟု ဝါရှောင်ကျေးရွာနေ လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။အဆိုပါ ကျေးရွာနေဒေသခံများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ည (၇) နာရီ အပြင်မထွက်ရသည့် မာရှယ်လောကြောင့် မိုးစပါး စိုက်ပျိုးရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်။ကန့်သတ်ထားသည့် အချိန်ထက်ကျော်လွန်၍ အိမ်ပြင်ထွက်လာပါက မည်သူ့ကိုမဆို ရန်သူဟု သတ်မှတ်ကာ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ သေနက်ပစ်ခွင့်ရှိကြောင်း ၀ါရှောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်။“ဒီနှစ် လယ်မစိုက်ရမှာတောင် ကြောက်နေကြတယ်။ လယ်တော့ ရှိတယ်။ လယ်ထွန်ဖို့ လူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။” ဟု လယ်သမား တစ်ဦးက ဆက်ပြောသည်။
6/05/2012 05:21:00 AM
အလုပ်သမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ရန် စက်မှုဝန်ကြီး ထောက်ခံ
လင်းဘိုဘို | တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၀၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၂ မိနစ် ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မေလ ဝန်းကျင်အတွင်း အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေရှာ ဆွေးနွေးသည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် စက်မှုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက အလုပ်သမား အရေး ကိစ္စများ ကာကွယ် ဖြေရှင်းပေးမည့် သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ အမြန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းရန် ထောက်ခံပြောဆိုသည်။ ချတ်ထရီယံ
ဟိုတယ်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့က ပြုလုပ်သည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ဝန်ကြီးက ယင်းသို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အလုပ်သမားရေးရာ ပြဿနာများကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားမည်ဟု ပြောဆိုသည်။“အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေ အမြန်ဖွဲ့ပါ။ သမဂ္ဂပဲခေါ်ခေါ်၊ ဘာခေါ်ခေါ် ဖွဲ့ပါ။ အလုပ်သမား အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ဖို့၊ Civil Societyတွေကကော၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကော ကူညီကြပါ။ မြန်မြန်ဖွဲ့ပါ” ဟု ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း က ဆိုသည်။
အမြန်ဖွဲ့ပါ။ သမဂ္ဂပဲခေါ်ခေါ်၊ ဘာခေါ်ခေါ် ဖွဲ့ပါ။ အလုပ်သမား အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ဖို့၊ Civil Society တွေကကော၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကော ကူညီကြပါ။ မြန်မြန်ဖွဲ့ပါ (ဓါတ်ပုံ လင်းဘိုဘို/ မဇ္ဈိမ)
အနာဂတ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အားကောင်းလာပါက အလုပ်သမား လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုရှိလာနိုင်ပြီး အလုပ်သမား တို့၏ အနေအထား အားကောင်းလာနိုင်သည်ဟု ဦးစိုးသိန်းက ခန့်မှန်းပြောဆိုပြီး အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဘက်မှ အလုပ်သမားရေးရာ အရာရှိများအနေဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ရအောင် လုပ်ပေးရန်လိုကြောင်း သူကပြောသည်။“Labor Officer တွေ ထားပြီး Monitor လုပ်ခိုင်းဖို့ လိုမယ်။ အစိုးရဘက်ကလည်း ဒီလိုတွေ ခန့်ထားဖို့ ကျနော် အကြံပြုပါတယ်။ Labor Ministry က Monitor လုပ်ရမယ်။ ၈ နာရီလား၊ ၉ နာရီလား။ ဘာလို့ ဖိနပ်ချွတ်ရလဲ။ ဖိနပ်ချွတ်တဲ့တိုင်းပြည် မရှိဘူး။ စီးရမယ်။
ဖုန်မတက်တဲ့ ဖိနပ်မျိုး စီးရမှာပေါ့။ ထိုင်ရမှာပေါ့။ ခရာမှုတ်ပြီး Break Time ပေးရမှာပေါ့။ စာဖတ်ချိန် ပေးရမှာပေါ့။ လူတွေပဲ၊ လူတွေ။ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ မြန်မာတွေ” ဟု စက်မှုဝန်ကြီး က ပြောဆိုခဲ့သည်။အလုပ်သမားများ၏
အလုပ်ချိန် တောင်းဆိုချက်ကို ကြားသိရ၍ စိတ်ထိခိုက် ခံစားရကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတက်သူ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး က ပြောသည်။
တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ သူတို့ကို အလုပ်ချိန်အဖြစ် မနက် ၇ နာရီက ည ၇ နာရီအထိသာ
သတ်မှတ်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်တခု ကျနော် သွားတွေ့တော့ တော်တော်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် (ဓါတ်ပုံ လင်းဘိုဘို/ မဇ္ဈိမ)
အလုပ်သမားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ သူတို့ကို အလုပ်ချိန်အဖြစ် မနက် ၇ နာရီက ည ၇ နာရီ အထိသာ သတ်မှတ်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်တခု ကျနော် သွားတွေ့တော့ တော်တော်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိ ပါတယ်။ တနေ့ ၈ နာရီ ဆိုတဲ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးကို နားမလည်ဘဲ သူတို့အခွင့်အရေး တောင်းနေတာ။ တနေ့ အလုပ်ချိန် ၁၄ နာရီအစား ၁၂ နာရီလောက် သတ်မှတ်ပေးရင် သူက တော်တော် ကျေနပ်နေပြီဆိုတဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။ ကျနော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်” ဟု ပြောဆိုတင်ပြသည်။အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို အဖြေရှာရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုကိုကြီး က ထောက်ပြပြီး အခက်အခဲအတွက် ဆန္ဒတောင်းဆိုသူများကို ဆူပူအုံကြွခြင်း အဖြစ် မရှုမြင်ရန် တိုက်တွန်းသည်။“ဆာလောင်သူတွေကို ဆူလောင်သူတွေအဖြစ် မသတ်မှတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” ဟု ကိုကိုကြီးက ဆိုသည်။၂ဝ၁၂
ခုနှစ် မေလ တလအတွင်း လစာတိုးတောင်းမှု အလုပ်သမားဆန္ဒတောင်းဆိုပွဲ ဖြစ်ပွားသည့် စက်ရုံ ၅၇ ရုံ (လုပ်သားအင်အား ၃၆,၈၁ဝ ဦး) ရှိပြီး၊ လက်ရှိအချိန်အထိ ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပြီးစက်ရုံ ၃၈ ရုံ (လုပ်သားအင်အား ၂ သောင်းကျော်) သာ ရှိသေးကြောင်း၊ စက်ရုံလုပ်သား ၁ သောင်းခွဲ ဝန်းကျင်ခန့်အရေး ဖြေရှင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောသည်။
၁ သောင်းခွဲ ဝန်းကျင်ခန့်အရေး ဖြေရှင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ပြော (ဓါတ်ပုံ လင်းဘိုဘို/ မဇ္ဈိမ)
အလုပ်သမားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတွင် ၂ဝ၁၁ အောက်တိုဘာ ၁၁ က ပြဋ္ဌာန်းသည့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေနှင့်
၂ဝ၁၂ မတ်လ ၂၈ တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည့် အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ဥပဒေ ဟူ၍ ဥပဒေ နှစ်ရပ် သာ စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေအဖြစ်
ရှိနေသည်။လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေ၊
လုပ်ခပေးရေး အက်ဥပဒေ၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေး အက်ဥပဒေ အပါအဝင် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် ဥပဒေ ၈ ခုမှာ လက်ရှိတွင် ပြင်ဆင်ရေး ဆွဲဆဲ အနေအထားတွင်ပင် ရှိသေးသည်။“ဥပဒေပြု လွှတ်တော်က အမတ်တွေကို ကျနော် တခုပဲ မေးချင်ပါတယ်။ တနာရီ ၆၅ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ဥပဒေ ရေးဆွဲခိုင်း မယ်ဆို ဖြစ်နိုင်မလားလို့ မေးချင်တယ်” ဟု အလုပ်သမားအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတဦးက ဆွေးနွေးပွဲတွင် မေးခွန်းထုတ်သွားသည်။
6/05/2012 05:17:00 AM
ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ လူ ၂၀၀ လောက်ပါဝင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ခန့်မှန်းပါတယ်။ အခုချိန်ထိတော့ တစုံ တရာ ဖမ်းဆီးအရေးယူတာ မရှိသေးပါဘူး။ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့
ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော့ ဒီကနေ့ သံတွဲမြို့မှာ သင်္ဂြိုဟ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တောင်ကုတ်မြို့၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေသတ်ဖြတ်ခံရတာဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရဲ့
အားနည်း တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ တောင်ကုတ်မြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်လှက ပြောပါတယ်။
by ကိုမိုးဇော် - (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း) သစ်ထူးလွင်
6/05/2012 04:33:00 AM
အမျိုးသမီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွီဒင်နိုင်ငံသွားမည်
နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွီဒင်နိုင်ငံက လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေကို လေ့လာဖို့အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အပါအ၀င် အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦးဟာ မနက်ဖြန် ဆွီဒင်နိုင်ငံကို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီခရီးစဉ်ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ(ဆီဒါ) ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ သွားရောက်တာဖြစ်ပြီး ၈ ရက်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ဆွီဒင်လွှတ်တော်ကို သွားရောက်လေ့လာမှာ ဖြစ်သလို အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့ ဒီခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်က
“ ဆွီဒင်မှာရှိတဲ့ ဆီဒါအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှ
ဖိတ်တာကို လွှတ်တော်ရုံးကနေပြီးတေ့ာ စီစဉ်ပေးတာ ဖြစ်တာပေါ့နော်။ အမျိုးသမီးတွေ ဒီ politic မှာလေ ခေါင်းဆောင်ရေးပေါ့နော်။ အဲဒီသွားလေ့လာဖို့
ဆွီဒင်ပါလီမန်တွေ လေ့လာဖို့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ ပါတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့ သူတို့ အကြောင်းတွေပေါ့နော်၊ သူတို့ရှင်းပြဖို့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီလွှတ်တော်မှာ သူတို့ debate လုပ်တာတွေပါတယ်။ ရေဒီယိုနဲ့ တယ်လီဗီးရှင်းကို သွားလေ့လာဖို့ပါတယ်။ အသေးစ်ိတ်တော့ ဟိုရောက်မှ သိမှာပေါ့”
မြန်မာအမျိုးသမီး လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ဒေါက်တာ မေ၀င်းမြင့် ၊ ဒေါက်တာ လှမြတ်သွေး
၊ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းငွေ ၊ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် နဲ့ ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့ အပြင် တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီက ၄ ဦး နဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၅ ဦးတို့ ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လအတွင်းကလည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက ဒေါ်မိမြင့်သန်းတို့ ပါဝင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ ဥရောပတိုက် နော်ဝေနိုင်ငံကို လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
6/05/2012 04:25:00 AM
ဆီးရီးယားတွင် လူ ၁၀ဝ ကျော် အစုအပြုံ လိုက် သတ်ဖြတ် ခံရမှုဖြစ်ပွား
04 JUN 2012 | BY ENVOYဆီးရီးယား နိုင်ငံ ဟိုလူ (Houla) ကျေးရွာ တစ်ရွာတွင် လူပေါင်း ၁၀ဝ ကျော် အစုအပြုံ လိုက် သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ပြီးနောက် ယင်းဖြစ်ရပ်က ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဟောင်း ကိုဖီအာနန်၏ ဆီးရီးယား ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ် များကို ပြင်း ထန်သော စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ပေါ် လာ စေခဲ့သည်။ယင်းသေဆုံးမှုတွင် အ သက် ၁၀နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၄၉ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃၂ ဦး အပါ အဝင် အနည်းဆုံးလူပေါင်း ၁၀၈ ဦးထက်မနည်းပါဝင်ကြောင်းသိရ သည်။ ဆီးရီးယား အစိုးရက ယခုသတ်ဖြတ်မှုကြီးတွင် မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိဟု ငြင်းဆိုထား သည်။သို့ရာတွင် အတိုက်အခံလှုပ် ရှားသူများကမူ ဒေသအတွင်းလက် နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များက အဆိုပါ ရွာအား ဗုံးကြဲ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည် ဟု ပြန်လည်စွပ်စွဲထားသည်။၄င်း တပ်ဖွဲ့များသည် ဆီးရီးယားသမ္မတ အာဆတ်ကို လိုလားသောအဖွဲ့ များဖြစ်ပြီး အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး သမားများအား လက်စားချေသတ် ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဟိုလူအစု အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းက ဆွန်နီနှင့် အာလာဝတီဘာသာ ဝင်များအကြား တင်းမာမှုပိုရှိလာသ ကဲ့သို့ ဆီးရီးယား အရေးတွင် အယ်လ်ကိုင်ဒါအကြမ်းဖက်သမား များ ပါဝင်ပတ်သက်လာကြောင်း လည်း အကဲခတ်များက ပြောသည်။ATM
6/05/2012 04:18:00 AM
အမှုအား အချိန်ဆွဲထားသဖြင့် ကာယကံရှင် အနေဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေ
04 JUN 2012 | BY ENVOYမြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် Y တံတား အနီး၌ လွန်ခဲ့သော နှစ်လ ကျော်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယာဉ် တိုက်မှုဖြစ်စဉ် တစ်ခုအား ယခုအချိန် အထိ အမှုဖွင့် အရေးယူမှု မရှိသည့် အပြင် ဆေးရုံကြီး၌ ဆေးဝါး ကုသမှုခံသည့် ဆေးစာကိုပင် သွားရောက် ထုတ်ယူခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယာဉ် တိုက်ခံရသူ အနေဖြင့် များစွာဆုံးရှုံး မှုများရှိနေကြောင်း ၄င်းမိသားစု များ ထံမှတစ်ဆင့် သိရသည်။မတ် ၄ ရက် ည ၈နာရီခွဲ အချိန်တွင် ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဒုတိယ နှစ် သင်္ချာ ကျောင်းသူ မဖြူဖြူသန့် (ယာဉ်တိုက်ခံရသူ)နှင့်သူငယ်ချင်း များသည် ရွှေတိဂုံစေတီတော်သာ သနာ ၂၆၀ဝ ပြည့် ဘုရားပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာမှ ပြန်လာပြီး သူ ငယ်ချင်းများနှင့်လမ်းခွဲခဲ့ရာ မြောက် ဥက္ကလာပမြို့နယ် Y တံတားအနီး သို့အရောက်တွင် ယာဉ်မောင်းကို သက်တင်မောင်းနှင်လာသည့် ဒ/၇၆၄၆ ဟိုင်းလတ် အဖြူရောင် ယာဉ်မှ အရှိန်ပြင်းစွာဝင်တိုက်ခဲ့ သည်။ယာဉ်တိုက်ခံရသည့် အရှိန်ကြောင့် မဖြူဖြူသန့်မှာ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ ဒဏ်ရာများ ရရှိသည့်အပြင် မျက်နှာပြင်၌ ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း၊ ဆီးအိမ် ပေါက်ကွဲခြင်းများ ပါခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့်ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ဆောင် ၇/၈တွင် ၂၁ ရက်ကျော်ကြာဆေး ဝါးကုသခံယူခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိ ရသည်။“ကျွန်မသမီးကတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူပါ။ အခုဇွန် ၁ ရက်ဆို ရင် ကျောင်းတက် ရတော့မယ်။ ဒါ ပေမဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဘယ်လိုသွားတက်မ လဲနော်၊ မသေအောင်တောင်မ နည်းကုထားရတာ၊ ယာဉ်တိုက်ခံရ ပြီးကတည်းက ဒီနေ့အထိတိုက် သွားတဲ့ကားသမားကတစ်ခါလေး တောင်လာမမေးဘူး။ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်တဲ့ တရားခံ ယာဉ်မောင်းကို လည်း အခုအချိန်ထိအာမခံနဲ့ လွတ်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ သုံးလနီးပါး ရှိသွားပြီ၊ တရားစွဲဖို့မပြောနဲ့ ဆေးရုံ ကြီးက ဆေးစာတောင်အခုထိသွား မထုတ်သေးဘူး။ ဒီအမှုကိုစစ်တဲ့ အမှုစစ်က ယာဉ်ထိန်းနယ်မြေ (၇) က ဒုရဲအုပ်အောင်________ပါ။ အဲဒီယာဉ်မှုစစ်လည်းအခုချိန်အထိ တစ်ခါမှလာမမေးဘူး။ ချိန်းရင် လည်းမအားဘူးလို့ ဆိုပြီး မတွေ့ရဘူး” ဟု ယာဉ်တိုက်ခံရသူ မဖြူဖြူ သန့်၏မိခင်ကရှင်းပြပါသည်။အမှုအားဥပဒေအကြံတောင်း ခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းများမရှိသည့် အတွက် ဥပဒေကြောင်း အရကူညီ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဦးမည် မဟုတ် သေးကြောင်း တရားစွဲဆိုပြီးမှသာ လျှင် ရှေ့နေတစ်ဦး အနေဖြင့်လုပ် ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ စတင် ဆောင်ရွက် နိုင်မှသာ ဖြစ်သည် အတွက် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်မှုစစ်အနေဖြင့် အမြန်ဆုံး တရားစွဲဆို တင်ပို့သင့်ကြောင်း မဖြူဖြူသန့် ၏ရှေ့နေကရှင်းပြခဲ့သည်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ယာဉ်တိုက်မှု များ၌ အမှုစစ်များ၏အချိန်ဆွဲမှု ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာသူနှင့်မိသားစု များအနေဖြင့် လူမှုရေး ဆုံးရှုံး နစ်နာ မှုများရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
6/05/2012 04:13:00 AM
စစ်တွေမြို့ အဓိကရုဏ်းမှာ တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီး ထိန်လင်းကပြောကြား
စစ်တွေမှာ ရဲစခန်းရှေ့ဆန္ဒပြနေသောပြည်သူများ - (ဓါတ်ပုံ-ကိုစန်းလွင် - ဖေ့စ်ဘုတ်)
စစ်တွေမြို့၌ ဇွန် ၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းနှင့် ၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းမှာ တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်၍ မာရှယ်လော ထုတ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီး ထိန်လင်း ကပြော သည်။"ညတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာ မနက် ၅ နာရီလောက်မှာ ပြီးသွားတယ် လက်ရှိ အခြေအနေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ သွားလာနေကြပါတယ် မာရှယ်လော ထုတ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး အားလုံးငြိမ်းငြိမ်းချမ်း ပါပဲ ညက ဖြစ်စဉ်မှာပါတဲ့ ၉ ယောက်ကိုတော့ ခေါ်ယူ မေးမြန်းနေပါတယ် သူတို့ကို ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ရပ်အပေါ်မေးမြန်းတဲ့ သဘောပါပဲ ထိန်းသိမ်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူး " ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး က ဖလားဝါးနယူး(စ်)ဂျာနယ်မှ တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်း ချက်ကို ဖြေကြားခဲ့သည်။စစ်တွေမြို့နယ်ရှိ နာဇီဈေးကို ပုဂ္ဂလိက သို့ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ကို ဒေသခံများကမကျေနပ်၍ ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
6/04/2012 05:13:00 PM
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ မေတ္တာရပ်ခံ ကြေညာချက်
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ မေတ္တာရပ်ခံကြေညာချက်ထုတ်ပြန် (ဇွန်လ၊ ၄ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်)စာအမှတ် - ၂၅/၂၀၁၂ (၈၈)ရက်စွဲ - ၄ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၂၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၂၈၄(က)၊ ၁၆/၃ရပ်ကွက်၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာဖုန်း - ၀၁ - ၅၇၇ ၆၅၆Email - 88generation@gmail.comရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ မေတ္တာရပ်ခံ ကြေညာချက်၁။ ကျွန်ုပ်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုစုံလင်စွာ ဖြင့် အေးချမ်းစွာ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။၂။ ဘာသာရေးကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ် ပဋိပက္ခအနည်းဆုံးနှင့် သည်းခံခြင်းတရားပြည့်ဝသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။၃။ ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကို အကြောင်းပြုသော ပဋိပက္ခများ၊ အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကြားသိရပါသည်။၄။ စင်စစ်အားဖြင့် မတရားပြုကျင့်၍ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း စသည်တို့မှာ ယဉ်ကျေးသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ မည်သို့မျှ လက်ခံနိုင်စရာမရှိသည့်အပြင် မည်သည့် ဘာသာတရားကမှလည်း လက်သင့်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။၅။ ၄င်းပြင် ထိုအခြေအနေဆိုးများသည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အကျိုးမပြုနိုင်ရုံမျှ မက နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်သော ထောင်ချောက်များသာဖြစ်သည်ကို သတိပြုမိစေချင်ပါသည်။၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများကို ရပ်တန့်ပြီး နိုင်ငံသားတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာအသီးသီးမှ ဆရာတော်ကြီးများ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး အနေဖြင့် မေတ္တာကိုအခြေခံ၍ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ “ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ” မှ အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
6/04/2012 04:10:00 PM
ဇွန် ၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ YPIယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း တောင်ကုတ်-သံတွဲလမ်းဆုံတွင်လူအုပ်စုမှ ၀ိုင်းဝန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးအား ယနေ့နေ့လည် ၂ နာရီတွင် သံတွဲမြို့ အစ္စလာမ် သုဿန်တွင်သဂြိုဟ်မည်ဟု သံတွဲမြို့ခံတဦး ကပြောသည်။ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း သံတွဲ-ရန်ကုန်သွား ရိုးမသစ္စာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ပေါ်ပါ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးကို တောင်ကုတ်မြို့ခံလူအုပ်က သံတွဲ တောင်ကုတ်လမ်းဆုံတွင် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသဖြင့် ယင်း ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများထဲတွင် တခြမ်းပဲ့ ဗလီ တရားထိုင်အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးအပြင် ရိုးမသစ္စာ မော်တော်ယာဉ်လိုင်း ကိုယ်စားလှယ်တဦးနှင့် သံတွဲမြို့ခံတဦးတို့ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်။၎င်းတို့၏ ရုပ်အလောင်းများကို ယနေ့နံနက် ၁နာရီခွဲကျော်တွင် သံတွဲမြို့သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာပြီး ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် သဂြိုဟ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရုပ်အလောင်းများ ထားရှိရာ သုဿာန်သို့ အသိမိတ်ဆွေများ နှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းများ လာရောက်ကြည့်ရှုလျှက်ရှိရာ လူပရိသတ် ၂၀၀ ကျော် ၃၀၀ နီးပါးရှိလာသည့်နောက် ရဲလုံခြုံရေးများ ပိုမိုတိုးမြှင့်ချထားခဲ့ရသည်ဟုလည်း သံတွဲမြို့ခံက ပြောသည်။ယခုကဲ့သို့ သံတွဲ ရန်ကုန်ကားပေါ်ပါ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ခရီးသည်အချို့အား ရန်ပြုသတ်ဖြတ်သည့်ညတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ ရခိုင်အမျိုးသားတဦး အသတ်ခံရသည်ဆိုသည့် သတင်းများထွက်ပေါ်ကာ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းသို့ လူအုပ်ကြီးက ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုသည့် အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ယခုလောလောဆယ်တွင် သံတွဲမြို့ လုံခြုံရေး အခြေအနေမှာ ပုံမှန်အတိုင်းသာရှိသည်ဟုလည်း ယင်းမြို့ခံက ဆိုသည်။ ။Yangon Press International
6/04/2012 04:04:00 PM
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အထူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုကို ၄င်းအင်တာနက်စာမျက်နှာwww.ministryofinformation.gov.mm မှာ တင်ပြထားရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေအနေအပြည့်အစုံနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရက တရားဥပဒေနှင့် အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်အစီအစဉ်များကို ယနေ့ည မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင် သံကြား သတင်းအစီအစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ထုတ်နေ့စဉ်သတင်းစာများတွင်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကို ထိခိုက် စေမည့် အပြုအမူများကို ရှောင်ရှားကြပါရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
6/04/2012 04:02:00 PM
NLDအမတ်ဦးဝင်းထိန် Belgium နိုင်ငံမှာ (ALDE)နှင့်(CALD)ဆွေးနွေးပွဲတက်နေ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရဲ့ မိတီလာမြို့ နယ်မှ ရွေးကောက် ခံ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သူ ဦးဝင်းထိန် သည် Belgium နိုင်ငံ၊ Brussels မြို့တွင် ( ၄ ဇွန် မှ ၈ ဇွန် ၂၀၁၂) အထိကျင်းပမဲ့ “The Summit of Alliance of Liberal Democrats for Europe (ALDE) and Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) ကို တက်ရောက်ဘို့အတွက် ၃ -၆-၂၀၁၂ ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်း ခရီးဖြင့်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲသည် ဦးဝင်းထိန် ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ဘာလီမှာ တက်ရောက် ခဲ့သော ဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဆက်စပ် သော ဆွေးနွေးပွဲ လို့လည်းသိရပါတယ်။ ၄င်းအခမ်းအနားတွင် ဦးဝင်းထိန်မှ ၅ ဇွန် နေ့တွင် မိန့်ခွန်း စကားလည်းပြောကြားမည်ဟုသိရပါတယ်။ ၄င်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ကမာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်၊ ၄င်းဆွေးနွေးပွဲအပြီး ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့သို့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး ခရီးစဉ် အဖြစ် ၂ ရက်ကြာ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
6/04/2012 03:29:00 PM
MAE SOT, Thailand — The first trip abroad in more than two decades by Myanmar’s opposition leader, Daw Aung San Suu Kyi, appears to have strained her crucial relationship with President U Thein Sein, who is leading the country’s transformation from military dictatorship to embryonic democracy.
Soon after Ms. Aung San Suu Kyi returned home on Sunday from Thailand, an adviser to Myanmar’s president criticized her for lacking “transparency” in carrying out her trip and for her comments warning international investors against “reckless optimism” about Myanmar.
“Personally, I really admire her, but I haveadoubt,” the adviser, U Nay Zin Latt, said in an e-mail. Public criticism of Ms. Aung San Suu Kyi, even in its mildest forms, is rare, partly because she is suchapopular figure in the country.
Mr. Nay Zin Latt’s comments were the first by one of President Thein Sein’s advisers — who serve as spokesmen — since the president canceled a
trip to Thailand on Friday. The Thai news media are portraying the cancellation asareaction to Bangkok’s handling of Ms. Aung San Suu Kyi’s visit.
The fact that Ms. Aung San Suu Kyi was allowed back into the country on Sunday wasamilestone on Myanmar’s road to national reconciliation. During the periods when she was not under house arrest in the past two decades, she chose not to travel abroad for fear of being denied re-entry by Myanmar’s military rulers.
Yet the discontent over her six-day visit to neighboring Thailand underlines the fragility of her country’s transition.
The complicated and delicate relationship between the president and Ms. Aung San Suu Kyi,anewly elected lawmaker, is in some ways the bedrock of the current reform process in Myanmar, formerly known as Burma. Their
meeting in August accelerated the changes sweeping the country and helped persuade Ms. Aung San Suu Kyi to rejoin the political system.
“Most of the improvements in Burma these days are because of the relationship between Thein Sein and Aung San Suu Kyi,” said Win Min,asenior researcher at the Vahu Development Institute, an organization set
up by Harvard-trained Burmese exiles that studies issues related to Myanmar. “I’malittle bit worried about their personal relations,” Mr. Win Min said. “If this relationship is strained, it could hurt national reconciliation.”
The abrupt cancellation on Friday of Mr. Thein Sein’s visit to Thailand appears to have beenamessage to Bangkok — and other governments across
the region — that Myanmar’s leader will not tolerate being overshadowed
by Ms. Aung San Suu Kyi’s star power.
Thailand and its neighbors are jockeying to participate in the opening up of Myanmar, an almost virgin market that investors hope will offer good returns amid the global economic slowdown.
Underlying the Thai government’s sensitivities toward Myanmar isahuge project foraseaport and joint economic zone in Myanmar that would connect to Thailand and provide access to the Indian Ocean.
Thai Rath, the largest newspaper in Thailand, reported Sunday that Prime
Minister Yingluck Shinawatra said in an interview that she was concerned that Ms. Aung San Suu Kyi’s visit had damaged Thailand’s relationship with Myanmar.
Mr. Thein Sein was “irritated” by Ms. Aung San Suu Kyi’s trip, the newspaper said, adding that Ms. Yingluck had ordered the Thai Foreign Ministry to “clarify” details of the visit to the public.
Myanmar’s government appears to have been most annoyed by Ms. Aung San Suu Kyi’s visit on Saturday toarefugee camp along the Thai-Burmese border, where Myanmar’s government has battled ethnic rebels for decades, and the opposition leader’s remarks atabusiness conference in
Bangkok on Friday at which she urged potential investors in Myanmar to proceed with caution.
Despite the turbulence caused by her trip, it is possible that relations
between Ms. Aung San Suu Kyi and the president will remain on an even keel. Many analysts believe that she and Mr. Thein Sein havearapport, and Ms. Aung San Suu Kyi has said on numerous occasions that she considers the president to be sincere in his desire for political change.
But the potential for discord between them worries people in Myanmar. So
far, political change has beenapersonality-driven process rather than
an institutional one, and as Ms. Aung San Suu Kyi told reporters during
her visit to Thailand, Mr. Thein Sein does not have an obvious successor. Both she and Mr. Thein Sein are in their late 60s and have health concerns. (Mr. Thein Sein hasaheart ailment, and Ms. Aung San Suu Kyi has been forced to rest by her doctors twice in recent weeks.)
The changes in Myanmar have been sudden and with few parallels — military juntas rarely voluntarily yield to civilian control — so analysts hesitate when asked to predict the country’s immediate future. But it seems unlikely that Ms. Aung San Suu Kyi will be placed under house arrest again or forced out of politics, because she retains considerable leverage. Her popularity is overwhelming, and sidelining her would be perilous for any government that tried.
6/04/2012 08:44:00 AM
Suu Kyi's popularity fears
Aung San Suu Kyi addressesacrowd duringavisit to the Mae La refugee camp in the western province of Tak, Thailand. Photo: Getty Images
Amid concerns that the visit of Aung San Suu Kyi might damage relations with Burma's government, Thai officials tried to rein her in on Saturday atarefugee camp on the Thai border.
Although the government accepted her last-minute request to visit the camp, which has about 50,000 people living on the border between Thailand and Burma, Thai officials declined her request forapublic address system, barred her from meeting ethnic minority leaders and tried, without success, to keep the international media away.
Suriya Prasatbuntitya, the governor of Tak province, where the camp is located, said: ''They didn't want her trip to become news because they don't want this to affect our relationship with Burma.''
The Associated Press YANGON, Myanmar -- Myanmar's government has invited foreign firms to invest in the country's electric power system for the first time in an effort to solve dire electricity shortages that recently led toaweek of protests.
Myanmar has suffered from power shortages for more thanadecade. It has
plentiful natural gas supplies, butapoor power distribution infrastructure that has lagged even more as the economy has grown.
But "this is the first time the government has invited investment in the
country's electric power distribution," Han Win Aung from the Myanmar Investment Commission said Saturday. Until now, the distribution of electricity was underastate monopoly.
6/04/2012 08:43:00 AM
Myanmar has stopped nuclear research: defence chief
Myanmar Defence Minister Hla Min speaks during the third plenary session at the International Institute for Strategic Studies (IISS) 11th Asia Security Summit in Singapore on June 2, 2012. AFP
SINGAPORE (June 2, 2012): Myanmar's government has halted fledgling research on the peaceful use of nuclear power, the country's defence minister said Saturday.
Lieutenant General Hla Min told an Asia security conference in Singapore
that the academic research had not progressed much because of what he called practical constraints.
"In this new government, we have already given up all activities of nuclear issues. We have no future plans to extend on this," he said through an interpreter.
Hla Min acknowledged that Myanmar's previous government, dominated by the military, had started academic studies on the peaceful use of nuclear power.
"In the case of the nuclear issue, we have already said very clearly that it is not for defence, it is not for weapons," he said at the summit, the Shangri-La Dialogue, which gathers mostly Asian defence officials.
"It's just research in the past. We have not progressed much due to our constraints," he said.
He added Myanmar had no "practical ways and means" to achieve its objectives, apparently suggesting the previous government lacked the funds to pursue the nuclear project.
But in an interview with Singapore's Straits Times published in January,
Myanmar President Thein Sein denied his country was trying to obtain nuclear weapons from North Korea, and called the allegations "unfounded".
Inalandmark visit to Myanmar in December, US Secretary of State Hillary Clinton called on the country to sever "illicit ties" with Pyongyang to foster better relations with Washington.
The defence minister on Saturday said Myanmar's links with North Korea resembled normal ties between any two countries.
But Hla Min pledged that "in the future, we will be open and transparent on this relationship, we will endeavour to do that".
He also dismissedasuggestion from the audience that Myanmar allow inspectors from the UN nuclear watchdog, the International Atomic Energy
Agency, into the country.
"We have nothing to check and nothing to see so it is irrelevant," he said.
Over the past year, Thein Sein, an ex-general, has taken steps to address criticism about the country's poor human rights record and suppression of political dissent.
The government has freed hundreds of political prisoners, eased media restrictions and welcomed Nobel laureate Aung San Suu Kyi's opposition back into politics.
Myanmar held historic by-elections on April 1 in which Suu Kyi wonaseat in parliament, and has signalled it is ready to accept more foreign
investment. – AFP
6/04/2012 08:41:00 AM
စစ်တွေမြို့ မှာ ဆန္ဒပြနေသူများ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နိမ်နင်းခံရ (အထူးသတိပေးချက် - နှလုံးရောဂါရှိသူများနှင့် လန့် တက်သူများ - ဓါတ်ပုံများကိုမကြည့်ပါနှင့်)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရဲစခန်းရှေ့ဆန္ဒပြနေသောပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်မှုမှာ ဇွန်လ၃ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားပြီး စစ်တွေအမှတ် (၁)ရဲစခန်းမှ လူစုခွဲစေရန် လူအုပ် အတွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဆန္ဒပြပြည်များ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်
အောက်က ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ---
စစ်တွေမှာ ရဲစခန်းရှေ့ဆန္ဒပြနေသောပြည်သူပုံ။ ရဲစခန်းမှသေနပ်ဖြင့်ပစ်လို့ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိသောပြည်သူများရဲ့ပုံတွေပါ။
By: Ko San Lwin
6/04/2012 03:39:00 AM
တောင်ကြီးမြို့ နယ် တောင်နီစံပြကျေးရွာမှာ ဈေးသူဈေးသားများ ဈေးဖွင့်ပေးဖို့ ဆန္ဒပြပွဲ
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ နယ် တောင်နီစံပြကျေးရွာမှာ
၀၂-၀၆-၂၀၁၂ နံနံက် ၇း၀၀ နာရီမှစပြီး ကျေးရွာသူ၊သားများ၊ဈေးသူ၊သားများ
ဆန္ဒပြပွဲစစဉ်မှာ လူအင်အား(၂၀၀) ခန့် ပါဝင်ခဲ့ ပီး နောက်ပိုင်းလူအင်အား (၅၀၀)
ခန့် အထိရှိခဲ တယ်။
ဖြစ်ပွားပုံကတော့ ဇွန်(၁)ရက် ၂၀၁၂ နေ့ညနေ ၅ နာရီ ၄၀ ခန့် အချိန်မှာ
တောင်နီစံပြကျေးရွာဈေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဌဦးလှသော်နှင့် မြိုနယ်စည်ပင်
မှ ပြည်နယ်ရဲအယောက်(၃၀)ခန့် ခေါ်ပြီးဈေးဆိုင်ခန်းများအားလုံးပိတ်ပစ်ခဲ့ 
အဲဒီနောက်မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ခေါင်မှ ပုဒ်မ(၁၈၈) ထုတ်ပြန်ကာ ဈေးအားကန်သတ်နယ်မြေအဖြစ်ဆိုင်းဘုတ်များချိတ်ဆွဲခဲ့ ပြီး ဈေးသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ 
ရန်အဓမ္မအမိန့် ပေးစေခိုင်းခဲ့ တယ်။
ဈေးသားတဦးကတော့ "ကျနော်တို့ ကဈေးဟောင်းမှာပဲ ရောင်းချင်တာ၊ မရွေ့ ချင်ဘူး။ အခုတော့ ဖာက်သယ်တွေလဲပျက်ကုန်တယ်။ ဈေးပိတ်ထားတော့ ကျနော်တို့တွေ ဘာလုပ်စားရမှာလဲဗျာ´ဟုဈေးသားတဦးမှ ရင်ဖွင့်ပြောကြာခဲ့ ပါသည်။
နောက်ဈေးသူ တဦးကလည်း `ကျမတို့ ဒီဈေးဟာဘိုးဘွားပိုင်ဈေးပါ။ သူတို့ 
(အာဏာပိုင်)တွေ ဈေးပြန်ဖွင့် မပေးမချင်း ကျမတို့ ကတော့
ဆက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမှာပဲ။ ဈေးသစ်က ဆိုင်ခန်းတွေကိုလဲကျမတို့ 
မ၀ယ်နိင်ဘူးလေ။ ဟု ဈေးသူတဦးမှပြောကြားခဲ့ တယ်"
အမိန်ကြော်ငြာစာအရ ဈေးပိတ်ထားပီး ဈေးသားများဈေးဟောင်းတွင် မရောင်းရဟု
ဆိုသော်လည်းဈေးပတ်ပတ်လည်တွင် စည်ပင်သာယာဈေးဆိုင်ခန်းများမှာမူ ဖွင့် လှစ်ရောင်းချခွင့် ရကြောင်း၊ ဈေးသူဈေးသားအချင်းချင်းတန်းတူညီမျှ အခွင့်
အရေးမရှိဖြစ်နေကြောင်းလည်း ဈေးသူဈေးသားများက ပြောပါတယ်။
ပေးပို့ သူ.... ဝေယံ(တောင်ကြီး)
6/04/2012 03:20:00 AM